Mogadishu Journal » 2019 » November » 30
Mjournal :-Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed ee fariisinkooda yahay Degmada Baardheere ayaa bilaabay howlgal balaaran oo ay Al-Shabaab kaga saarayaan deegaanno dhaca Galbeedka Degmada Baardheere oo maalmahii la soo dhaafey ay soo buux dhaafiyeen Al-Shabaab. Dhame Cali Turkish...
Mjournal :-Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xaruntooda ayaa ku ansixiyay Hindise sharciyeedka Shirkadaha Dalka. Kulakii 17aad ee Kalfadhiga 6aad ee Golaha Aqalka sare oo uu shir guddoominayay Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare...
Mjournal :-General Yuusuf Cali Qasaay Yuusuf Cagey oo ka tirsan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaalla Xaafada Warshada caanaha ee degmada Hodan. Dilka Waxaa geystay Sarkaal kale oo ka tirsan Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la...
Mjournal :-Dowladda Sacuudi Carabiya ayaa weli ka soo jawaabin Safiirkii dowladda Soomaaliya u magacawday dalkaas muddo shan bil ka hor. Ilo wareedyo kala duwan ayaa sheegaya in tallaabada Sacuudiga ku aqbalin Safiirka Soomaaliya u magacwday dalkaas ay ka dhigan tahay mid diidmo...
Generaal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka oo Gurigiisa lagu dhax dilay
Mjournal :-General Yuusuf Cali Qasaay Yuusuf Cagey oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa la sheegay in lagu dhex dilay gurigiisa oo ku yaalla Xaafada Warshada caanaha ee Muqdisho. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dilka Jeneraalka, kuwaasoo qaarkood sheegayaan...
Madaxweynaha Kenya oo sheegay in ciidankiisa ay sii Joogi doonaan Soomaaliya
Mjournal :-Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidankiisu ay baaqi ku sii ahaan doonaan Soomaaliya, ka dib Khudbad uu jeedinaayay Cutubyo ka tirsan Ciidanka Kenya. Waxaa uu sheegay madaxweyne Kenyatta in Dowladdiisu ay ka go’an tahay la dagaalanka Al...
Mjournal :-Guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa kulan ay ku yeesheen Magaalada Hargeysa ku doortay Gudoomiyaha cusub ee Guddiga doorashooyinka. Cabdirashiid Riyo Raac ayaa loo doortay guddoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland. Riyo Raac waa xubinta muranka ugu badan ka...
Mjournal :-Maxamed Cali Xumad Guddoomiyaha Baarlamaanka Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ku guuleystay xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Midoobay ee Afrika. Maxamed Cali Xumad ayaa sheegay in guushiisa ay tahay mid Fursad weyn u ah dalalka ku yaalla geeska Afrika oo aysan soo marin...
Guddoonka Baarlamaanka oo Guddi u saaray xayiraadii safar ee Xildhibaan Daleys
Mjournal :-Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa Guddi xaqiiqo raadin ah u saaray Xayiraadii Safar ee dhawaan ay sheegtay Xildhibaan Daleys Xasan Aadan in lagu sameeyay xilli ay doonaysay in ay aado degmooyin ka mid ah gobolka Gedo. Gudoomiyaha golaha Shacabka ayaa Guddiga ka dalbaday...